दिनमान गुर्मछान - नारी
दिनमान गुर्मछानका लेखहरु
म स्क्रिनमा हेर्दै रोमान्टिक मुडमा उक्लिँदै गएकी थिएँ । उमेरको उन्मादमा जोकोही उमङ्गिन पुग्छ । हो, ममा पनि उमेर सुलभ चञ्चलता बाँकी नै थियो । हो, यतिबेला होस हराएकी थिएँ । दृश्य अश्लील थियो । त्यो उसकी पूर्वप्रेमिकाको थियो, ऊ आफैँले भनेको थियो । त्यो दृश्यले म चकित भएँ । यस्तो कसरी हुन सक्छ ! ऊ मलाई त्यो दृश्य किन देखाइरहेको छ !
दिनमान गुर्मछान, मंसिर १४, २०७४
जब ऊस“ग मेरो भेट भयो, म त्यतिबेला दुःख र फ्रस्टेसनको बोझमा अल्झिएकी थिए“ ।
दिनमान गुर्मछान, भाद्र २९, २०७३